दाङमा २१ दिने शिशुमा पनि कोरोना भाइरसकाे सङ्क्रमण – Annapurna Daily
दाङमा २१ दिने शिशुमा पनि कोरोना भाइरसकाे सङ्क्रमण
On May 4, 2021 93
दाङ – दाङमा २१ दिने शिशुमा पनि कोरोना भाइरसकाे सङ्क्रमण देखिएको छ । दाङको घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा आज (सोमवार) गरिएको पीसीआर परीक्षणमा घाेराही उपमहानगरपालिका १५ का २१ दिने शिशुमा सङ्क्रमण देखिएको हो । साेमवार नै वडा नम्बर १५ कै एक महिने अर्का शिशुसहित ६० जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो ।
घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा दुई सय ६१ जनाकाे पीसीआर परीक्षण गरिएकाेमा दुई सय एक जनामा पोजेटिभ देखिएको हो । सङ्क्रमित हुनेहरूमा घोराही र तुलसीपुरका धेरै छन् । योसँगै दाङमा सक्रिय सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या एक हजार आठ सय नाघेको छ । अहिलेसम्म दाङमा कोरोनाबाट ८१ जनाकाे ज्यान गएकाे छ ।
यो पनि, मोरङमा सङ्क्रमणबाट पाँचको मृत्यु
कोरोना सङ्क्रमणबाट मोरङमा आज पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी मृत्यु हुनेहरूमा दुई महिला र तीन पुरुष रहेका छन् । मृत्यु हुनेहरूमा विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालमा चार र मोरङको बेलबारी नगरपालिकामा होम आइसोलेशनमा एक जना रहेका छन् ।
मृत्यु हुनेमा विराटनगर महानगरपालिका–१४ घर भएका ६२ वर्षीय पुरुषको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको छ । निजलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि सोमबार नोबेलको कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
इलामको इलाम नगरपालिका–४ घर भएकी २९ वर्षीया महिलाको सोही अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको छ । मृतकलाई कोरोना पुष्टि भएपछि यही वैशाख १३ गते उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो । निजलाई निमोनियाको पुरानै समस्या रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
यसैगरी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ का ७७ वर्षीया वृद्धा महिलाको पनि नोबेलमै उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको छ । मृतकलाई कोरोना देखिएपछि उपचारका लागि सोमबार अस्पताल भर्ना थियो र दमको पुरोना समस्या रहेका अस्पतालले जनाएको छ ।
प्रदेश नं २ को सप्तरी हनुमान नगर–कङ्कालनी–२ का ३५ वर्षीय पुरुषको सोही अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको छ । कोरोना पुष्टी भएपछि उपचारका लागि यही वैशाख १७ गते भर्ना गरिएको अस्पतालका प्रबन्धक दाहालले बताउनुभयो ।
बेलबारी नगरपालिका–२ का ६६ वर्षीय पुरुषको होम आइसोलेशनमा आज मृत्यु भएको छ । निजलाई यही वैशाख १६ गते पीसीआर परीक्षण गराउँदा पोजेटिभ देखिएपछि होम आइसोलेशनमा बसेका थिए ।
दैनिक ओखर खानाले शरिरलाई मिल्नेछ यति धेरै नसाेचेका १७ फाइदाहरु ! जानीराखौं
यस्ता छन दैनिक एउटा ल्वाङ खानुका १० फाइदा: खोकीदेखि जोर्नी दुखेकोसम्म उपचार
मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन,असोज २ गते शनिबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज विश्वकर्मा दिवस, विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै
यो सानो फूलले पनि बनाउनसक्छ तपाईलाई मालामाल, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
आजदेखि ४३ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल खुल्दै, के मा कति छुट र कहाँ कहाँ खुल्दैछन् ?
मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन,असोज ०१ गते शुक्रबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
भू’लेर पनि नगर्नुहोस् यी २ व्यक्तिले प्याजको से’वन, नत्र हुनेछ वि’ष बराबर